Beta 2 nke iOS 11.1 biara nke ohuru na emojis obi uto | Akụkọ akụrụngwa
Apple na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na polishing iOS 11, ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ ya, nakwa na ọ malitebeghị n'ahịa na ụkwụ dị mma nke a pụrụ ịtụ anya ya, ọ bụ n'ihi ọtụtụ nsogbu ndị ọrụ na-akọ banyere batrị ahụ.
Agbanyeghị, na Cupertino, ha anaghị elekwasị anya naanị na nsogbu batrị, kamakwa ha na-agbasi mbọ ike na-agbakwụnye akụkọ na-atọ ụtọ maka ọha mmadụ. Otu n'ime ha ga-abụ incorporation nke ọhụrụ emoji, kpọmkwem 20, site n'aka beta 2 nke iOS 11.1.
Emoji ọhụrụ a, nke ugbu a ga-adị site na ịwụnye beta 2 nke iOS 1.1, ga-erute ọha na eze na nchekwa zuru oke na nsụgharị ikpeazụ. Ha ga-anọ na ngwaọrụ ọ bụla emelitere na ụdị ọhụrụ nke iOS 11, n'agbanyeghị ngwaọrụ ahụ.
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, na ekele maka ọtụtụ ndị na - akwado emoji, akụkọ anyị ga - ahụ n'ime obere oge, dịworị na netwọk nke netwọk. Site na adreesị a ị nwere ike ibudata emoji ọhụrụ na-enweghị ichere maka mmelite ngwanrọ ọhụrụ ka ewepụtara iji nweta ha.
Naanị ihe anyị nwere ike ịjụ Apple ugbu a ga - abụ igwe nyocha, ka ịghara ịgabiga ma gaa chọta emoji anyị na - achọ. Ọ bụghị n’oge dị anya gara aga ọ bụghị nnukwu ọrụ siri ike, mana uto nke ọnụọgụ emojis dị, ọ bụrụla ihe na-agwụ ike na nke na-eme ọtụtụ ndị ọrụ enweghị ahụ iru ala.
Kedu ihe ị chere maka emojis ọhụrụ dị na iOS 11?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Beta 2 nke iOS 11.1 biara nke oma emojis
New CAT S31 na S41 smartphones, ekwentị ndị kachasị sie ike maka ndị na-achọ ọrụ